Gudbiyaha Awood Yar, FM Tayada Codka Gudbinta, 50 Watt FM Gudbiye
Rarida (USD): 40
Wadarta (USD): 645
Ku saabsan FMT5.0-50H
Maxaad u doorataa FMT5.0-50H Rugta Raadiyahaaga?
FMUSER FMT5.0-50H waa gudbiyaha baahinta FM iyo kicinta FM ee idaacadaha yaryar ee FM. Gudbiyaha FMT5.0-50H FM wuxuu leeyahay sifooyin kala duwan oo gudbinta signalada RF ballaaran, daacadnimo sare, tayada codka wax soo saarka sare, faragelinta ka hortagga, iyo hawlgal sahlan. FMT5.0-50H waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan 0-50W FM-gudaha FM-ta ugu hooseeya. FMT5.0-50H FMT5.0-50H FM-gudbiye FM ah oo awood yar ayaa si weyn looga isticmaalaa idaacadaha yar yar ee kala duwan, sida baahinta masraxa ku dhex jirta, baahinta kaniisadda, baahinta imtixaanka, baahinta kambaska, baahinta bulshada, warshadaha iyo macdanta. baahinta, meelaha dalxiiska ee baahinta, FMTXNUMX-XNUMXH sidoo kale waa mid ka mid ah gudbiyaasha FM-ta hooseeya ee ay door bidaan kuwa xiiseeya qalabka idaacadaha FM-ta xirfadleyda ah.
Guddi LCD dhijitaalka ah oo isticmaale-saaxiibtinimo leh, iyadoo la isticmaalayo hal buro si loo xakameeyo.
Shaashadda LCD ee isku-dhafan waxay soo bandhigaysaa dhammaan halbeegyada ay ku jiraan inta jeer ee gudbiyaha, stereo, iyo mono, mugga, heerkulka tuubada amplifier, mitirka codka maqalka ee UV, awoodda hore, awoodda muuqata, qaabka qaabaynta, xooga-saarista, iwm.
1U 19-inch dhammaan kiis aluminium ah oo dhumucdiisuna, xoog leh oo daadinta kulaylka aad u fiican.
Nidaamka soo noqnoqda ee saxda ah ee PLL, si loo hubiyo in soo noqnoqda aanu ka fogaanin in ka badan 10 sano, oo leh qalab-kodeer isteeriyo tayo sare leh oo ku dhisan.
Awood heer sare ah oo AGC nidaamka xakamaynta dheelitirka, wax soo saarka tamarta la hagaajin karo laga bilaabo 0 ilaa 50watts, iyo si toos ah u kasbashada korantada si loo ilaaliyo awooda wax soo saarka inta u dhaxaysa xadka loo dejiyay iyada oo aan leexleexan.
Gelida ishaadu waxay taageertaa gelinta maqalka ee XLR iyo RCA, iyo sidoo kale SCA iyo calaamadaha RDS iyadoo la isticmaalayo isku xirka BNC AUX.
Cod-weyneeye RF wuxuu isticmaalaa transistor-ka LDMOS si uu ugu adkeysto xattaa ismaandhaafka culus ee culeyska ka badan 65: 1 VSWR ee barta isku xirka 5dB.
Xalka ugu Wanaagsan ee Idaacadaha FM-ta
1 *FMT5.0-50H 50W FM gudbiyaha
Had iyo jeer xasuuso inaad ku xidho anteenada marka hore ka hor inta aanad ku xidhin gudbiyaha sahayda DC, haddii kale, gudbiyaha waa gubi doonaa.
Soo noqnoqda: 87.5-108MHz
Habka habaynta: FM, leexashada ugu sarreysa ± 75KHz
Awoodda wax soo saarka RF: 0 ~ 50W, tallaabo 0.1W, qalad ± 0.5dB
Xakamaynta harmonic: ≤-72dB
Hirarka hadhaaga ah ee dhexda: ≤-72dB
Asynchronous AM SNR: ≥-80dB (wax habaysan ma jiro) ≥-65dB (400Hz, 100% modulation)
Isku-dhafka AM SNR: ≥-70dB (wax habaysan ma jiro) ≥-60dB (400Hz, 100% modulation)
Xidhiidhiyaha Soo-saarka RF: N Dheddig (L16)
Xidhiidhiyayaasha Galinta Maqalka: XLR Dheddig iyo RCA Dheddig
Calaamadda Mono ilaa saamiga sanqadha: ≥ 80 dB (20 ilaa 20KHz)
Saamiga isteeriyo-to-sanaq: ≥ 80 dB (30 ilaa 15KHz)
Xallinta isteereyga: ≥ -55dB
Jawaabta soo noqnoqda maqalka: 30 ~ 15000Hz ± 0.4dB
Dhalanrog maqal ah: <0.1%
Heerka maqalka: -15dB ~ 15dB tallaabo 0.5dB
Gelinta codka: -15dB ~ 0dB
Kala duwanaanshaha korantada korantada: 110V ~ 260V (xoog caalami ah)
Isticmaalka tamarta: <320VA
Habka qaboojinta: qaboojinta hawada qasabka ah
Habka qaboojinta: <95%
Cabbiraadyada: 484 x 260 x 44 mm iyada oo aan gacanta iyo protrusions, 19 "1U loox xiniin ah.